Lalàna momba ny heloka bevava dia ilay ampahany tamin ny vahoaka ny lalàna izay heloka bevava dia manome sazy ny olona izay manao ny fitondran-tena, mavitrika na ankolaka, izay ny lalàna manaiky ho toy ny heloka bevava.
Misy fandikàn-dalàna dia toy izany ihany raha naorina sy eken’ny lalàna izany. Araka ny fitsipiky ny definiteness, ny didim-pitsarana dia tsy maintsy ho mahagaga amin’izao fotoana mazava ho azy rehetra ny antoko inona ireo fitondran-tena izay ara-dalàna sy izay olona dia tsy ara-dalàna. Tsy maintsy ho arakaraka eo amin’ny famaizana ary ny heloka bevava, ny famaizana dia tsy ho tafahoatra ny fandikàn-dalàna nataony (fitsipiky ny proportionality). Lalàna momba ny heloka bevava ihany ny olon-tsotra lalàna nolanian’ny parlemanta, na ny lalàna laharana ambany no manan-kery afa-tsy ho an’ny fotsiny fepetra arahana ara-teknika (ohatra, mba atao inona ny zavatra zava-mahadomelina). Lalàna momba ny heloka bevava ihany no manan-kery amin’ny ho avy, tsy afaka hanasazy ny zava-nitranga teo aloha ny fidirana an-kery ny lalàna, dia lalàna momba ny heloka bevava dia tsy mitodika amin’ny tany aloha ny vokany. Ny italiana lalàna mifehy ny heloka bevava, na vaovao ny heloka bevava sy ny fiarovana ny fepetra tsy maintsy nampidirina ao amin’ny fehezan-dalàna heloka bevava ny manova ny organika (fitsipiky ny hitehirizany ny fehezan-dalàna). Ny Fanjakana, mandràra ny sasany olombelona ny fitondran-tena (heloka), amin’ny alalan’ny fandrahonana manokana sazy afflittiva (mendrika), ny fiarovana ny soatoavina fototra ny olona. Ary izany no karazana sazy, ‘hasarobidin’, izay mampiavaka ny heloka bevava, ny heloka fanalam-baraka, ny takelaka sy ny fitantanan-draharaha fandikàn-dalàna.
Nefa, izany no karazana sazy, izay hoe, ‘hasarobidin’, manavaka ny lalàna momba ny heloka bevava avy amin’ny sivily sy ara-panjakana
Ny sazy vokatry ny fanitsakitsahana ny famaizana ny fitsipika no manan-danja, endrika na ambaratonga samihafa ny mafy arakaraka ny heloka. Fanaovana heloka bevava dia zaraina amin’ny heloka bevava sy ny misdemeanors: ny voalohany dia ireo fandikan-dalàna izay mety hitarika amin’ny fanamelohana ho faty ny fiainana an-tranomaizina, fanagadrana, tsara, raha misdemeanors dia ireo fandikan-dalàna izay mety hitarika amin’ny fanamelohana ho faty ny fisamborana azy na ny tsara. Ny fanomezana ny lalàna mifehy ny heloka bevava dia ahitana avy amin’ny fitsipika, izay mandrara ny manokana olombelona ny fitondran-tena, ary noho ny sazy izay manome ny vokatra ateraky ny fandikana ny fitsipika. Izany dia mazava fa, na raha misy ny heloka bevava amin’ny ankapobeny dia toy izany koa any amin’ny fanjakana samy hafa, ny sazy mety ho samy hafa, ary koa ny maro ny heloka dia mitovy amin’ny fanjakana ny fanjakana, ao ny dikany fa ianao no manendry ny hafa mafy ny fitondran-tena toy izany koa ny anti-tsosialy dia ny hoe fanjakana rehetra manasazy ny sasany ny fitondran-tena fa tsy ny hafa ny sasany, rehetra araka ny fivoaran’ny lalàna sy ny fiaraha-monina eto amin’izao tontolo izao.
Ny toetry ny heloka bevava fitsipika ho faty no foto-kevitra, any Italia, ny fanontaniana taloha
‘Amin’ny voalohany, ny valiny dia mirona any ny fitarihan’ mahatsapa ireo vokatry afa-tsy ara-dalàna ao indrindra, mazava denominated heloka bevava. mila mandinika ny heloka bevava vokatry ny mazava hoe ity fomba: ny filahiana, ary ankehitriny isika dia afaka, tsy misy isalasalana, ampio ny fepetra mbola Avy amin’izany trano, izany no hevitra araka izay momba ny lalàmpanorenana no miantoka nametraka ny fampiharana ny sazy ampiharina ny lalàna rehetra izay manana fiantraikany bebe kokoa ho toy ny fanehoan-kevitra izay izy ireo dia tsy tokony hanao ny tenany, izany hoe, ho toy ny fihetseham-po ny heloka toy izany — mety misy, ary misy tanjona hafa, fa manaraka ny ambany, izay no zava-dehibe, toy ny voalaza etsy ambony. Tsy mandrafitra ny»heloka bevava», ka niteny izy, dia ny ara-dalàna vokatry ny anjara ratsy izay mikendry ny famelombelomana, ara-toekarena, na ara-pitondrantena, ny fahasimbana nateraky ny takelaka: simba, fanamboarana, amin ‘ny laoniny ny toe-quo ante’. Ny tranga-lalàna ny Strasbourg Fitsarana eo amin’ny toe-javatra maro, no nilaza ny maha-zava-keloka bevava noho ny tanjon ny fampiharana ny miantoka ny dingana tokony arahina (art. enina ny ECHR), ny sazy, raha toa ka amin’ny fomba ofisialy ny sokajiana ho toy ny raharaham-panjakana ao anatiny lamin ny Fanjakana, raha mbola araka ny hita iray, fara fahakeliny, ny mason-tsivana (ilay antsoina hoe»fepetra Izy») tsinjaraina toy izany koa ny lalàna supranational ity fanamboarana. Nahoana ny sazy dia tokony ho raisina ho betsaka ny heloka bevava eo ambany ny ECHR dia tsy maintsy manolotra iray, fara fahakeliny, ireo endri-tsoratra:»ny fitsipika izay mametraka ny ara-panjakana ny sazy dia tokony mampihatra ny generality ny subsidiaries, ary hanao ny fisorohana, ny famoretana sy ny famaizana, ary tsy fotsiny ny fanonerana na ny sazy azo inoana ho napetraky dia tsy maintsy mitarika ny mpanoratra ny heloka bevava, ny manan-danja ny sorona nataony, dia ny lafiny ara-toekarena, ary tsy ahitana any ny tsy fananana fahafahana»
Ny dimy amby efa-polo tena te-jiolahy any Eoropa - nampifandraisina mivantana